काठमाडाैं उपत्यकाका यी ठाउँमा पाइन्छ ५० लाखदेखि डेढ करोडसम्मका घर
काठमाडाैं उपत्यकामा घर किन्न कति रकम चाहिन्छ हाेला ? कुन ठाउँमा कति मूल्यसम्मका घर पाइएलान् ? काठमाडाैंलाई स्थायी बसाेबास बनाउन चाहनेहरूमा यस्ताे जिज्ञासा स्वभाविक हाे ।
आउनोस्, जानौँ काठमाडौंमा कति मूल्यसम्ममा कस्ता घर किन्न पाइन्छ ? घरजग्गा कारोबार संघ तथा घरजग्गा कारोबारमा विचौलियाको काम गर्दै आएका विभिन्न संस्थाहरूले दिएका मूल्य सूचीका आधारमा हामी तपाईंलाई याे जानकारी दिँदैछाैँ ।
काठमाडाैं उपत्यकामा चिटिक्क परेकाे, भूकम्प प्रतिराेधी घरलाई ५० लाखदेखि १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म पर्छ ।काठमाडौंको चन्द्रागिरी, बालाजु, भक्तपुरको पुरानोठिमी, सरस्वतीखेल, चाँगुनारायण, ललितपुरको लुभु, लामाटारलगायतका क्षेत्रमा ५० लाखभन्दा माथि मूल्य हालेर घर किन्न सकिन्छ । घरजग्गा कारोबारमा विचौलियाको काम गर्दै आएको नेपाल होम्सले आफ्नो साइटमा ९८ लाखदेखि १ करोड ५० लाखसम्म रुपैयाँमा घरहरू बिक्रीका लागि राखेको छ । एकदेखि अढाइतले यी घर चन्द्रागिरी क्षेत्रमा १३ फिटे बाटोमा तीन आना जग्गामा बनेका हुन् । बुढानिलकण्ठ क्षेत्रमा पनि १३ फिटे बाटोमा डेढ करोड रुपैयाँमा अढाइ तलासम्मका घर किन्न पाइन्छ ।
त्यस्तै टीकाथली क्षेत्रमा पनि ९८ लाख रुपैयाँबाट घर किन्न सकिन्छ भने बालाजु क्षेत्रको जरंखु, सानोवाइपास, गोलढुंगा, चन्द्रगिरी, ललितपुरको लुभु, लामाटार, भक्तपुरको चाँगुनारायण, बोडे, सरस्वतीखेल, पेप्सीकोला टाउनप्लानिङ, काठमाडौंको कपन, मूलपानी, बालुवाखानीलगायत क्षेत्रमा ५० लाखदेखि डेढ करोड रुपैयाँसम्म घरहरू किन्न सकिनेछ ।
त्यस्तै ललितपुरको इमाडोल पनि मध्यम अाय भएका मानिसहरूको पहिलो गन्तव्य बन्दै गएको छ । १० मिनेटदेखि ३० मिनेटमा चक्रपथ भेटिनुको साथै सस्तो मूल्यमा घरहरू पाइने भएपछि मध्यम वर्गीय क्रेताहरू यस क्षेत्रमा भेटिन्छन् । यो क्षेत्रमा पनि डेढ करोडदेखि ४ करोडसम्मका घरहरू किन्न सकिनेछ ।
घर किन्न चाहेमा वा विभिन्न क्षेत्रमा बिक्रीका लागि राखिएका घरकाे मूल्यबारे जानकारी लिनुपरेमा घरजग्गा कारोबारी संस्थाहरूबाट जहाँ रहेर पनि जानकारी लिन सकिने छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, फागुन ८, २०७७, ०७:३३:००